बामदेब लाई चुनाब जित्न फलामको चिउरा ! नेपालमा बिकासको खाका र बामपन्थी एकिकरण को नारा के हुदैछन ? – HamroSamrachana
बामदेब लाई चुनाब जित्न फलामको चिउरा ! नेपालमा बिकासको खाका र बामपन्थी एकिकरण को नारा के हुदैछन ?
हाम्रो संरचना । १६ मंसिर २०७४, शनिबार ०८:५९
# चुनाबमा होमिएको समयमा बामपन्थी एकिकरण कहां सम्म पुग्यो ? बामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार बनेमा नेपालमा बिकास खाका कस्तो बन्ने छ ?
# बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा संयुक्त लोकतान्त्रीक गठबन्धन र बाम गठबन्धन बीच चुनाबी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बाम गठबन्धनको निम्ती पहलकर्ताका रुपमा समेत चर्चामा रहनुभएका बामदेब गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार भएकाले पनि बढी चर्चामा रहेको छ ।
# बर्दियाको ककौरामा स्थायी ठेगाना भएका बामदेब गौतम स्थानिय तहको निर्वाचनको आंकडा अनुसार सयुक्त लोकतान्त्रीक भन्दा झण्डै २५ हजार मतले बढी रहेको आंकलन गरिएको छ ।
बाम गठबन्धनको मत यती हुदा हुदै पनि किन बामदेब लाई चुनाब जित्न फलामको चिउरा जस्तै भएको छ ?पटक । पटक –पटक मन्त्री बनि सक्नुभएका गौतमलाई आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक बिकासको नमुना देखाउने बबई नहर मात्र किन बन्न पुग्यो ?
बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रतिष्पर्धामा रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निर्वाचनको क|म गरेका प्रतिबद्धता आधारमा तयार पारिएको अन्र्तबार्ता :
यस पटकको निर्वाचनमा के के बिषयमा जनतालाई आश्वासन बाडदै हुनुहुन्छ ?
अब आश्वासन होइन बाम गठबन्धनहरुको बहुमतको सरकार बन्छ र नेपालको बिकासलाई तीन तहमा बाडेर बिकास गर्ने योजना बनाएका छौ । त्यो भनेको समयको आधारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन छन् । तत्कालका लागि नागरिकको गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोरञ्जनका विषय उठाएका छौँ ।
त्यसपछि सिँगो समाजको परिवर्तन हो । हाम्रो संविधानले अबको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनेको छ ।
यसै बमोजिम यी विषय हाम्रा साझा घोषणा अनुसार अघि सारेका छौं । नेपाली समाजमा अहिले पनि घरवार बिहीन सुकुम्बासी, भूमीहीन, मुक्त कमैया, कम्लहरी, गरीब र उत्पीडित पहिचान गरी बसेका नागरिकहरु छन ।
हाम्रो सरकार बनेपछि पाँच वर्षभित्रमा सुविधा सम्पन्न आवास, एक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसँगै माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पास गरेको ६ महिनाभित्रै तालिम दिई रोजागारी दिएर शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने, स्वास्थ्य विमा लागू गर्ने, उपचारका लागि गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुलाई सरकारले आधा पैसा मिनाहा गर्ने मध्यकालीन एजेण्डा छन् ।
यसैगरी ६ वर्ष भित्रमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। सबै कृषि भूमीमा सिँचाई, नेपालका प्रमुख नदीहरुबाट २० हजार मेघावाट भन्दा बढी जल विद्युत आयोजना सुरु गरि विद्युत उत्पादनले नेपाललाई भरपुर बनाउँछौ ।
चुवाव जितेर गएपछि सबै कुरा बिर्सेको मतदाताको आरोप छ ?
– कुरा बिर्सेको होइन । हामी सरकारमा बस्दा लागू गर्ने प्रयास गर्छौं । सरकारबाट बाहिरीए पछि अरुले आफनो अनुकूलले मात्र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा हामीले शुरुवात गरेका कामहरु ओझेलमा पर्छन् । हामी प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार चलाउनेलाई घच्घच्याउने हो । सरकारमा नहुँदा काम पूरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । अब बन्ने सरकारले बिकासको तालिकानै बनाएर यसमा लाग्छ म जितेर गएपछी यसमै लाग्ने छु ।
कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतम तपाईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । तपाईंले नै चुनाव जित्नु हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
कांग्रेससँग प्रतिष्पर्धाको कुरै छैन । २०४८ सालदेखि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको परिणामले पनि कांग्रेस भन्दा वामपन्थीको जनाधार निकै बढी रहेको देखाईसकेको छ ।
यहाँ हाम्रो पक्षमा देखिएको जनमत नै मैले जित्ने आधार हो । वामपन्थीको जनाधारलाई कसैले फकाएर कुण्ठित गर्न सक्दैन । बर्दिया मात्र होइन नेपाल भरी हामीले गरेको चुनावी तालमेल अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा दुई तिहाई जनमत छ । त्यो जनमत नै वाम गठबन्धनले जित्ने मुख्य आधार हो ।
अधिल्लो संविधानसभा चुनाव जितेपछि तपाई बर्दिया छाडेर प्यूठान जानुभयो । यसपटक फेरि फर्कनु भएको छ । बर्दिया छाडेपछि कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको भनिन्छ नि ?
म बर्दियामा फर्केर आउँदा कार्यकर्ता मतदाता असन्तुष्टि छन् भन्नै मिल्दैन । यसअघि पनि चुनाव जितेपछि छोडेर किन जानुभयो भन्नेमा असन्तुष्टि हो । अहिले फर्केर आउँदा कार्यकर्तामा उत्साह जागेको छ ।
मेरो आवश्यकता फेरि महशुस भयो । विपक्षीसँग खरो उत्रनका लागि कार्यकर्ताले मेरो उपस्थिति अनिवार्य ठाने, मैले पनि त्यही महशुस गरेँ । त्योबेला मेरो व्यक्तिगत निर्णयले बर्दिया छाडेको होइन । पार्टीको निर्णय अनुसार प्यूठान गएको हुँ । यहाँ त पार्टी बलियो थियो नै । प्यूठानमा पार्टीलाई बलियो बनाउनु थियो ।
त्यसैले पार्टीको निर्देशन बमोजिम त्यहाँ गएको हुँ । आखिर पार्टीलाई फाइदा नै भयो । म यहाँ फर्कंदा कोही आतंकित भएका छन् भने त्यो कांग्रेस नै हो । वाम गठबन्धन भएपछि कुनैपनि ठाउँमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा नै छैन ।
चुनाव जितेपछि तपाईको पहिलो प्रथमिकता के हुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुकुम्बासी, घरवार विहीन, मुक्तकमैया कम्लहरी र पिछडिएका समुदायलाई सुविधा सम्पन्न आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जन प्रदान कामबाट सुरु हुन्छ ।
यसैगरी कृषिको व्यवसायिकरण, उर्जाको विकास, पर्यटनको विकास र औधोगिक क्षेत्रको विकास प्रथमिकतामा हुनेछ । यी सबै कामहरु ५ वर्षमा हामी पूरा गर्नेछौँ ।
हामीले ३ तहमा रेल चलाउनेछौँ । एउटा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर, औधोगिक करिडोरको समानान्तर, मध्यपहाडी राजमार्ग समानान्तर र काठमाण्डौँमा विद्युतीय मेट्रो रेल संचालन गर्छौँ ।
यसैगरि ४ लेनको हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण २ हजार किलोमिटर सडक निमार्ण र ८१ हजार किलोमिटर आफनो गाउँ, आफै बनाउँ अन्तर्गतका बाटोहरु पिच गरि कृषि सडकका रुपमा स्थापित गर्नेछौँ ।
तपाई वाम गठबन्धनको सुत्रधार मानिनु हुन्छ । यो वाम गठबन्धन चुनावसम्मको मात्र हो की पार्टी एकता सम्म पुग्छ ?
यो गठबन्धन हाम्रो पार्टी एकताको कुरा हो । अहिलेको चुनावी गठबन्धन हाम्रो पार्टी एकताको पहिलो चरण हो । पार्टी एकता गर्ने तयारी गरिसकेका छौँ । पार्टी एकता समन्वय समिति केन्द्रमा, त्यसपछि प्रदेशमा, जिल्लामा र स्थानीय तहदेखि वडासम्म बनिसकेको छ ।
त्यसकारण पार्टी एकता प्रमुख हो । पार्टी एकता गर्न समय लाग्ने भएकाले हतारमा चुनावी तालमेल मात्र गर्यौं । निर्वाचन आयोगले दिएको समय तालिका अनुसार समयमै पार्टी एकता गर्न सकेनौँ, त्यसैले तालमेल मात्र गर्यौँ । पार्टी एकता हुने कुरा निश्चित छ ।
अब कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुन्छ र यो एकता पछि सबैभन्दा ठूलो चोट परेको छ भने त्यो चोट कहिले नमेटिने गरि नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ । अहिलेको तालमेलबाट बन्ने सरकार ५–१० वर्षका लागि मात्र होइन, आगामी ३० वर्षसम्म हाम्रै नेतृत्व हुन्छ
लेखा अधिकृतहरुको पनि समायोजन सूची सार्वजनिक: को-कहां परे सूचि सहित….
जुम्लामा माटो खानीमा पुरिँदा सासु–बुहारीको मृत्यु
कैलालीको भजनीमा मास हिस्टेरिया: १२ छात्रा एकैसाथ बेहोस
भारतीय प्रहरी द्धारा नेपाल प्रहरीलाई ४० युवती हस्तान्तरण
चन्द्रग्रहण ! १ सय ५२ बर्ष पछिको दुर्लभ खगोलीय घटना: के गर्न हुन्छ ! के गर्न हुदैन ! बैज्ञानिक र धर्मशास्त्रीय आ-आफनो मान्यता